Booliska Shabeelaha hoose oo ka hadlay Dhibaato ka jirta Inta u dhexeysa Afgooye iyo Wanla-weyn. – warqaat.com Information About Somali New's Today
HomeWARARKA MAANTABooliska Shabeelaha hoose oo ka hadlay Dhibaato ka jirta Inta u dhexeysa Afgooye iyo Wanla-weyn.
November 5, 2018 Abdirahman Al-cadaala WARARKA MAANTA Comments Off on Booliska Shabeelaha hoose oo ka hadlay Dhibaato ka jirta Inta u dhexeysa Afgooye iyo Wanla-weyn.
Gaashaanle sare Cabdi Ibraahim Shaamow Taliyaha qeybta booliska G/Sh.Hoose oo la hadlay Warqaat.Com ayaa sheegay in Wadada isku xirta Degmooyinka Afgooye iyo wanla-weyn ay ka jiraan dhibaatooyin loo geysto Dadka Shacabka ah eek u safra wadadaasi.
Taliyaha ayaa Sheegay in Kooxaha dadka dhibka u geystay in aqoonsan yihiin dagaalamayaasha Al-Shabaab sida uu hadalka u dhigay.
Sidoo kale Taliyaha ayaa Sheegay in Tilaabo ay ka qaadi doonaan Burcada Dadka shacabka ah ku dhibaateeyo Wadada isku xirta Afgooye iyo Wanla-weyn ee Gobalka Shabeelaha Hoose.
Maalmihii ugu dambeeyay Shacabka Soomaaliyeed eek u safra wadada isku xirta Degmooyinka Afgooye iyo Wanla-weyn ayaa ka cabanayay dhac ay u geystaan Burcada hubeysan.
DHAGEYSO: Kheyre oo dhaliilay Wasiiradii ka horreeyay Xukuumaddiisa
705,620 total views, 2,837 views today
705,620 total views, 2,837 views today War ka soo baxay Hay’ada Nabadsugida iyo Sirdoonka Qarank ayaa waxaa lagu sheegay in Ciidamada Amniga ay Gacanta ku dhigeen Maxkaxdii ka dambeeyasay weerarkii dadka badan ku dhinteen ee lagu qaaday […]
705,495 total views, 2,836 views today
705,495 total views, 2,836 views today Wasaaradda Arrimaha Dastuurka ee Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta qabatay munaasabad lagu daahfurayay Barnaamijka Carabiyaynta Dastuurka KMG ah oo ay ka soo qeybgaleen Wasiir Ku-Xigeenka Arrimaha Dastuurka iyo Safiirka […]
705,525 total views, 2,836 views today
705,525 total views, 2,836 views today Wareegto ka soo baxay Xafiiska Madaxweynaha Dowlad-goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam(Madoobe) ayaa Maanta oo Khamiis ah waxaa lagu Magacaabay Hanti dhowraha guud ee Jubbaland Wareegtada ayaa waxaa Hanti dhowrahaGuud ee Jubbaland […]
705,587 total views, 2,836 views today
705,587 total views, 2,836 views today Kulan socday in ka badan sideed saacadood ayaa waxa uu Turkiga ku dhexmaray Mas’uuliyiin uu horkacayay Wasiirka Gaadiidka iyo Duulista Soomaaliya Maaxamed Cabdullaahi Salaad(Omaar) iyo Mas’uuliyiinta Shirkadda Favori ee Maamusha Garoonka […]
705,642 total views, 2,837 views today
705,642 total views, 2,837 views today Taliye ku xigeenka Ciidamada Booliska Dowlad Goboleedka Galmudug Col, Cabdi Jaamac Cabdulle ayaa shaaciyay in kadib baaritaano ay sameeyeen ay heleen halkii laga soo abaabulay weerarkii lagu qaaday Xarun uu Gaalkacyo […]